Knowledge – Shwe Pann Thee
သင့်စိတ်ထဲမှာ အခိုင်မြဲဆုံးလို့ထင်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကြိုးထုံးလေးကတစ်ဆင့် သင့်စရိုက်ကို ပြောပြမယ်သင့်စိတ်ထဲမှာ အခိုင်မြဲဆုံးလို့ထင်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကြိုးထုံးလေးကတစ်ဆင့် သင့်စရိုက်ကို ပြောပြမယ်
သင့်စိတ်ထဲမှာ အခိုင်မြဲဆုံးလို့ထင်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကြိုးထုံးလေးကတစ်ဆင့် သင့်စရိုက်ကို ပြောပြမယ် သင့်စိတ်ထဲမှာ အခိုင်မြဲဆုံးလို့ထင်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကြိုးထုံးလေးကတစ်ဆင့် သင့်စရိုက်ကို ပြောပြမယ် နံပါတ် =၁ သင်ဟာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမ ှမှီခိုအားကိုးခြင်းမရှိတဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးသူတစ်ယောက်ပါ။ မိမိဘဝကို မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ...
တွဲတာကြာလာရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ တွဲတာကြာလာရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ ပြောစရာစကားတွေကုန်လာတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းပြောနေရင်းဖြစ်ဖြစ်စာရိုက်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် အင်းအဲနဲ့ဘာဆက်ပြောရမယ်မှန်းမသိဘူး။ ပြီးတော့ အရင်ကထက်ပိုပြီးပြဿနာများလာတယ်။ မိသားစုရေး လူမှုရေးအကုန်ပါ၀င်ပတ်သက်လာတော့ ပြဿနာသေးသေးလေးကအစကိုယ်နဲ့ဆိုင်လာတယ်။ ပြောရရင် အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေများလာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကာလမှာအပြတ်များတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်တာများပြီး ကြုံလာမယ့်ကိစ္စတွေကိုရင်မဆိုင်ချင်တော့တာမျိုး နည်းနည်းဆိုပြဿနာဖြစ်လို့စိတ်ကုန်စိတ်ပျက်လာပြီး အတူရှိခဲ့သမျှအချိန်တွေအကုန်ပလုံသွားတယ်။ သုံးနှစ်ကျော်လေးနှစ်၀န်းကျင်ကာလက အခက်ခဲဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီအချိန်က တွဲခါစတုန်းကလိုအနုအရွတွေလုပ်ရမှာပျင်းလာပြီး ...
မင်းတုန်းမင်းကြီး မိဖုရားများရခြင်း အကြောင်းမင်းတုန်းမင်းကြီး မိဖုရားများရခြင်း အကြောင်း
မင်းတုန်းမင်းကြီး မိဖုရားများရခြင်း အကြောင်း မြန်မာရှင်ဘုရင်အများစုဟာ မိဖုရားများကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်မိဖုရားများတာလဲဆိုတာကို မြန်မာမင်းအုပ်ချုပ်ပုံ ( အင်ရုံစာတမ်း ) မှာ စနစ်တကျ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မင်းတုန်းမင်း က မိဖုရားအများကြီး ယူတာမဟုတ်ဘူး။ သူကြိုက်လို့ယူတာ သုံး၊ လေးပါးပဲ။ ...
ငွေ . . . ပါးစပ်ပေါက်မပါပေမယ့် သူပါမှ အရာရောက်တဲ့နေရာတွေမှ အများကြီးပဲငွေ . . . ပါးစပ်ပေါက်မပါပေမယ့် သူပါမှ အရာရောက်တဲ့နေရာတွေမှ အများကြီးပဲ
ငွေ . . . ပါးစပ်ပေါက်မပါပေမယ့် သူပါမှ အရာရောက်တဲ့နေရာတွေမှ အများကြီးပဲ ရှာတုန်းကသာ မနည်း ကုန်းရုန်းပြီးရှာရတာ ပြန်ထွက်သွားဖို့ကျတော့ လွယ်လွယ်လေးပဲ ငွေဆိုတာ အရာရာမဟုတ်ပေမယ့် သူမပါတဲ့အရာတွေကလဲ တော်တော်ကို ရှားပါလာပါပြီ ငွေ နဲ့ ...
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ ၁။ လျှပ်စီးကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှ ဝေးသောနေရာသို့ လူနာကိုရွေ့ပါ။ circuit breaker, fuse box (သို့) Outside Switch တို့မှတဆင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ဖြတ်တောက်ပါ။ မီးမပိတ်နိုင်လျှင် လျှပ်စစ်မစီးကူးနိုင်တဲ့ ...
မိခင်ဝမ်းအပြင်ဖက် ရောက်ရှိခဲ့တာကို လုံးဝမသိဘဲ မိခင်ဝမ်းဗိုက် အတွင်းထဲကလို အတင်းပွေ့ဖက်ထားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အမြွှာလေးကလေးနှစ်ဦးရဲ့မိခင်ဝမ်းအပြင်ဖက် ရောက်ရှိခဲ့တာကို လုံးဝမသိဘဲ မိခင်ဝမ်းဗိုက် အတွင်းထဲကလို အတင်းပွေ့ဖက်ထားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အမြွှာလေးကလေးနှစ်ဦးရဲ့
မကြာသေးမီက လူ့လောကထဲသို့ရောက်ရှိလာတဲ့ မွေးကင်းစ အမြွှာ ယောကျ်ားလေးနှစ်ဦးဟာ မိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသလိုအချင်းချင် းပွေ့ဖက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ အသက်နှစ်လအောက်အမြွှာ ယောကျ်ားလေးနှစ်ဦးအား သားဖွားသူနာပြုများက ရေချိုးပေးနေစဉ်တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့ကြပြီး ၎င်းလက်နှစ်ဖက်နှင့် ခြေထောက်များဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဖက်သွယ်ထားကြတာကို ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ...